Dota2- एक लोकप्रिय कम्प्युटर खेल मोबा विधा, शौकिया विश्व प्रतियोगिताको kiberdistsipliny गर्न एक परिमार्जन बाहिर वृद्धि जो। रमाइलो गेमप्लेको रोचक र विविध वर्ण लागि प्रसिद्ध छ। एक अक्षर मृत्यु अगमवक्ता नाम हामी विस्तृत विश्लेषण। तर सुरु लागि - यसको इतिहास को एक सानो बिट।
मृत्यु अगमवक्ता: इतिहास
धनी र महान मान्छे संसारभरि बाट आफ्नो भाग्य जान्न, अगमवक्ता मृत्यु आए पनि afterlife। लामो शताब्दीपछि मात्र त्यो जीवित गर्न मृत्युको रहस्य समाधान गर्न सक्छ। तर त्यो मृत्यु भविष्य मा देख्यो जब हरेक नयाँ भविष्यवाणी संग, यो झन् आफ्नै रक चासो प्रबल छ। झन्, त्यो एक प्रश्न मृत्यु अपिल: "जीवन यात्रा को अन्त मा मेरो लागि के प्रतीक्षामा छ?" तर जवाफ मरेको मौन थियो।
व्याकुल, Krobelus जीवन छोड्न निर्णय गरे। तर यो मृत्युको दूत उपहार स्वीकार छैन, पर्याप्त थिएन। त्यसपछि Krobelus पनि ठूलो जोस फेरि माथि र अधिक मरणासन्न फेरि पुनरुत्थान, आफ्नो मृत्यु हतारिएको। कालो ईर्ष्याले अगमवक्ता को हृदय swallowed। सबै जीवन घृणा, त्यो नायक आफ्नो बाटो मा, एक लामो-प्रतीक्षा शान्ति पाउन सङ्घर्ष गर्न प्रयास चुनौती दिए। "तपाईं किन, दयनीय असहाय प्राणी मर्न गर्न सक्नुहुन्छ र afterlife सबै रहस्य पत्ता? म एक ठूलो foreteller सधैं बाहिर आफ्नो अस्तित्व जीवित को नीरस र dreary संसारमा eke गर्नुपर्छ?" - यी वाक्यांश मृत्यु अगमवक्ता थिए, गर्न सम्बोधन प्रत्येक आफ्नो सिकार नयाँ। भविष्यवक्ता भनेर piously मरिरहेका मा यो नश्वर संसारमा प्राण को एक बिट छोड्छ कि विश्वास, र एक बिन्दुमा, अझै पनि एक लामो-प्रतीक्षा शान्ति पत्ता लगाउन सक्षम र underworld को लुकेका रहस्य पत्ता लगाउन। यो दिन, सधैं सास्ती र उनको भावशून्य, पत्थर प्राण को पीडा को भविष्यवक्ता भनेर बचाउँछ गर्ने एक को खोज मा उनको frail र थकित शरीर वरिपरि भटक। तर कथा मृत्यु अगमवक्ता अन्त्य गर्दैन, र त्यो मरेको को दुनिया मा आफ्नो स्थान कमाउन गर्न धेरै बढी काम थियो।
वर्ण बारेमा बिट
गाढा, दुष्ट, मृत्यु खोजिरहेका - एक वर्ण मृत्यु अगमवक्ता छ। यो Banshee यी गुण देखाउनुहुन्छ तस्बिर। यो सबैभन्दा रोचक र सुविधाजनक मध्ये एक छ वर्ण Dota 2. तपाईं शत्रुहरू लागि गम्भीर समस्या सिर्जना गर्ने, एउटा मात्र खुशी प्राप्त, उनको लागि खेल्ने। राम्रो दुवै व्यावसायिक खेलाडी र छैन "Dota" दुनिया धेरै परिचित छन् शुरुआती लागि उपयुक्त। साथै, यो वर्ण सञ्चालन र spells सिक्न सजिलो छ। मुख्य विशेषता खेल मा कुनै पनि अन्य जादूगर जस्तै, वास्तव मा, आफ्नो विचार शक्ति छ। उत्कृष्ट महसुस एक लिएर mage रूपमा, असाधारण अवस्थामा, यो एक सहायक को भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ।
मृत्यु अगमवक्ता संग सशस्त्र मा एकैचोटि धेरै शत्रुहरू हिट एक शक्तिशाली पर्याप्त पहिलो कौशल छ। राम्रो ठूलो विनाश ढोंगी लागि अनुकूल र आफ्नो शत्रुहरूबाट भाग्नु। धेरै छिटो RECHARGE छ, त्यसैले यो शत्रु टोली संग लडाई मा समस्या को धेरै दिन्छ।
दोस्रो कौशल यो जसबाट उहाँलाई spells प्रयोग गर्न अनुमति दिने, शत्रु मा "मौन" लटकी, धेरै उपयोगी पनि छ। यो एक राम्रो सीमा छ, र तपाईं प्रतिद्वन्द्वी गर्न सम्पूर्ण लडाई शक्ति तल ल्याउन अनुमति दिने, छ सेकेन्ड को लागि सक्रिय पम्पिंग अन्तिम स्तरमा। को हिज्जे कारण कम cooldown गर्न, लडाई मा धेरै पटक प्रयोग गर्न सकिन्छ।
Banshee निष्क्रिय, तर धेरै उपयोगी छ तेस्रो क्षमता - कौशल र मानयो लागत को recoil कम गर्छ, र पूर्ण हाम्रो परम बलियो र धेरै महत्त्वपूर्ण छ जो तपाईं भेट्टाउने वा शत्रु देखि भाग्नु आवश्यक जब समग्र गति सूचक, एउटा वृद्धि दिन्छ।
मृत्यु अगमवक्ता खेल मा सबै भन्दा शक्तिशाली ultimeytov मध्ये एक छ - सक्रियता पछि, वर्ण तीस सेकेन्डको लागि दुष्टात्मा शत्रु गर्न क्षति कारण छ कि, साथै ढोंगी र टावर को सहायता सम्मन। आत्माहरूलाई को समापन मा भएको फर्कन underworld र नायक को स्वास्थ्य (शत्रु मा inflicted को क्षति को एक चौथाई) बहाल। अन्तिम पम्पिंग हिज्जे मा 1000 एकाइहरु गर्न क्षति हुन सक्छ। टावर धक्का लागि ठूलो, जो औसत अधिकतम स्वास्थ्य छैन पन्ध्र अधिक सय छ।
नायक को कौशल पम्पिंग मा बदलाव धेरै छैन। सुरु पहिलो कौशल जाँच्न उपयोगी हुनेछ लागि, उहाँले हामीलाई हत्या ढोंगी मदत र हाम्रो विरोधी सताउन हुनेछ। दोस्रो स्तर स्विंग dumbness मा, बस मामला मा, यदि अचानक कसैले zagangat नायक को सोच्छ। निष्क्रिय कौशल प्रत्येक वर्ण उपलब्ध रूपमा बित्तिकै तुरुन्त लिएको छ रूपमा, Ulta बोल्ने बिना नै, पाँचौ स्तर मा ले।
मृत्यु अगमवक्ता otovarit खेल प्रारम्भिक चरण मा निम्न वस्तुहरू हुन सक्छ: हतार पन्जा को पन्जा हामीलाई +15 आक्रमण गति दिन हुनेछ, हतार diadem वृद्धि विशेषताहरु को पन्जा, को ट्याङ्गो तपाईं 16 सेकेन्ड को लागि स्वास्थ्य पुनर्स्थापना, अनुमति दिन्छ3शुल्क समावेश गर्छ, फलाम शाखा प्रदर्शन गर्न बढावा दिन हुनेछ तीन लिन।
बिस्तारै हामी थप हाम्रो विकल्प वृद्धि हुनेछ जो Bracer, सङ्कलन। थप जादू छडी, हामीलाई शत्रु खेलाडीहरू देखि मानयो चोरी गर्न अनुमति दिन जो किन्न। त्यसपछि जूता लिन र चरण जूता गर्न सुधार गर्छ। यो हाम्रो लागि गति र क्षति, र एकाइहरु पास गर्ने क्षमता धेरै थप्नेछ।
को Bloodstone किन्न खेल बीचमा द्वारा, यसले हामीलाई मानयो रिकभरी को 500 स्वास्थ्य वृद्धि, 400 मानयो, +9पुनर्जनन गर्न र + 200% दिनेछु। यो हुनेछ गति गर्न + 100 देखि यात्रा को जूते थप्न र कुनै पनि भवन वा पर्याप्त संघ गर्न teleport।
स्वास्थ्य पुनर्जनन को रूप मा एक निष्क्रिय क्षमता - हृदय Tarascans, वा Tarrasque को हृदय, + स्वास्थ्य गर्न 300, +40 शक्ति र बोनस रूपमा प्राप्त को अन्त मा।
यो सेट तपाईंलाई धेरै बलियो खेलाडी प्राप्त।
कसरी मृत्यु अगमवक्ता लागि खेल्न
नायक विदेशी मंत्रालय मा पूर्ण महसुस। कुनै मामला मा छैन वर्ण को downsides को एक आफ्नो स्वास्थ्य छ रूपमा, खेल को प्रारम्भिक चरण मा बाहिर राख्नु पर्छ, बरु यसको लगभग पूरा अभाव। कहिलेकाहीं तपाईं क्षति र पनि ढोंगी सामना गर्न सक्ने क्षमता छ, तपाईंको विरोधी को पहिलो कौशल फेंक गर्न सक्नुहुन्छ, र उहाँलाई प्राथमिकताको अर्को। मानयो को स्तर अनुगमन गर्न नबिर्सनुहोला। आफ्नो मुख्य कार्य अप छैटौं स्तरमा - धेरै ढोंगी मार्न।
परम अध्ययन गरिनेछ गरेपछि, हामी भयभीत हुन बन्द र सुरक्षित टावर अन्तर्गत देखि बाहिर क्रल गर्न सुरु गर्दै हुनुहुन्छ। धेरै राम्रो, तपाईं तुरुन्त आसन्न लाइनको एक zagangaete भने, नायक मार्न र टावर Ulta नष्ट। किनभने मृत्यु अगमवक्ता अझै पनि एक उच्च survivability भएको एकल, लक्षविना हिड्नु छैन उचित छ। युद्धमा को सक्रिय चरण पछि, आफ्नो टोलीका साथ राख्न प्रयास गर्नुहोस्।
सुरु खेलको बीचमा द्वारा impudent र आक्रामक खेल्छन्। खेल मा सबै भन्दा राम्रो pushers को एक - Ganges को एक धेरै महत्त्वपूर्ण भाग, गति लाभ हामीलाई पनि किनभने तपाईंको हात मा, रेखा निगरानी गर्न नभुल्नु अनुमति दिन्छ। यदि सम्भव छ भने, तपाईंको टोलीलाई ठूलो मद्दत गर्नेछ सबै सगाई मा भाग लिन।
खेलको अघिल्लो चरण राम्रो भयो कि म्याच को अन्त, शर्त संग, हामी एक हत्यालाई मिसिन बन्न छ। Dopushivayte लाइन, शत्रु को आधार गर्न उड्यो र spells को दायरामा पतन सबै फैलियो।
छोटो, यो धेरै रोचक र आवश्यक अक्षर। उहाँले धेरै मोबाइल र बहुमुखी छ। दुवै Dota 2. एक नक्कली मृत्यु अगमवक्ता मा शुरुआती र अनुभवी खेलाडी, यस्तो योजना को befits रूपमा वर्ण, श्रद्धाको तीतो मृत्यु भरिएको लागि पूर्ण। तर हाय, खेल मा रूसी भाषामा तिनीहरूले सम्म अनुवाद भएको छैन गरिएका।
को संग पैसा "GTA 5" मा गोप्य ठाउँ। पीसी मा "GTA 5" मा गुप्त ठाउँमा
"Stalker: संयुक्त पाक 2" धोखा कोड र Cheats
शूटर, तपाईं हिंड्न सक्छौं जहाँ: खेल को एक सिंहावलोकन
Rengar: हाइड, वर्णन र वर्ण को विशेषताहरु
रहस्य र सुझावहरू: ": खतरनाक भाइरस Stalker" को खण्ड
स्वीकृति के हो र यो के हो?
गोर्की अनुसार जीवनको अर्थ के हो, र यो आनन्द बराबर छ कि छैन भनेर?
हामी कसरी WebMoney फोनमा पैसा हस्तान्तरण गर्न साथ बुझ्न
जब सपनामा भाँडा भरिन्छ, भाग्यले के गऱ्यो?
पुरानो सामान कहाँ भाडामा? पुराना कुराहरू को स्वीकृति। वस्त्र संग्रह को आइटम
घर मा दायाँ आफ्नो कान कसरी झटका गर्न
घायल जिब्रो रूपमा: प्रक्रिया, हेरविचार को विवरण, र मात्र
सामान्य प्रस्तावहरू, तिनीहरूको सुविधाहरू
एक्रिलिक बाथटब "Radomir": ग्राहक समीक्षा